VhuraSUSE renumbers Leap kuti uyananise seSUSE | Linux Vakapindwa muropa
VhuraSUSE renumbers Leap kuti uyananise seSUSE
Joaquin Garcia | | Kugoverwa
Vazhinji venyu muchaziva kana muri kushandisa OpenSUSE Leap, yepamutemo OpenSUSE flavour iyo ichiri kugadziridzwa neSUSE Enterprise uye Nharaunda yayo. Iyi flavour yepamutemo inoenda yeshanduro 42.2, vhezheni ichateverwa neOpenSUSE Leap 42.3 uye izvi zvichateverwa naOpenSUSE Leap 15.
Kana paine backtrack pane OpenSUSE Leap kuverenga uye iri yechikonzero chakanaka. Zvirinani kuti ndozve zvakatsanangurwa nemumwe wevatungamiriri vechirongwa ichi, Richard Brown.
Sezvakataurwa naBrown, kuchinja manhamba iyi raive dambudziko raive riripo mukuparadzira kwenguva yakareba uye izvo zvakagadzirwa pakati pezvimwe zvinhu izvo vashandisi veOpenSUSE Leap vaisagona kuwana mukana wakananga kune iyo SUSE Enterprise repositories.
Nekudaro, zvinotarisirwa kuti OpenSUSE Leap 15 ine rutsigiro zvirinani uye iri nani package yekuisa chishandiso, mapakeji uye zvinyorwa zvichave zvakafanana mhando seSUSE Enterprise Linux.
OpenSUSE Leap 42.3 ichave yekupedzisira vhezheni ine yakakwira OpenSUSE kuverenga
Asi usazvidya mwoyo ipapo OpenSUSE Leap haimire kusununguka uye haina kuchinja chero chinhu, icharamba ichive kugoverwa kwemahara kunokwezva vashandisi vazhinji.
Ehe, ichave nemabasa uye maficha anowanikwa muSUSE, chimwe chinhu chinonakidza uye chakanaka nekuti hatifanire kukanganwa kuti SUSE Enterprise Linux ndiyo yekuparadzira kwepamberi kwekambani yeSUSE.
OpenSUSE iri yemahara yekugovera iyo inotora yakanakisa yeSUSE kuti uipe iyo kuGnu / Linux Nharaunda, ichi ichokwadi umo vazhinji vanotora chikamu, vashandisi vakawanda uye ndosaka iri kuyedza kugadzirisa mamwe matambudziko akagadzirwa pakutanga.
Iyo OpenSUSE Leap kuverenga ndeimwe yavo asi havazi ivo voga kunyangwe zvishoma nezvishoma isu tiri kuona kuti matambudziko aya anogadziriswa sei. Kana iwe uchida kuziva nezve OpenSUSE, in ichi chinyorwa tinotaura nezvekugovera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » VhuraSUSE renumbers Leap kuti uyananise seSUSE
Nei gehena uchiramba uchisheedza Open Source Mahara? Kwete chete izvo zvisiri izvo, asi iwe unoreva zvisizvo vaverengi kuti ivo havazive mutsauko, izvo sezviri pachena kana iwe usinga zive.
Uye ndedzipi misiyano.
Pindura kuna lorabe
Rakazorodzwa, hazvina kuipa izvo
Chinja yako Gnome kuita MacOS, Windows kana Kubatana neiyi script
Ubuntu Foni haichazove nerutsigiro muna Chikumi, asi isu tichine Plasma Mobile